Hotlọ oriri na ọ hotụ Europeanụ European Kempinski Hotels na-agbasa na America na akụ okomoko Dominica ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Dominica » Hotlọ oriri na ọ hotụ Europeanụ European Kempinski Hotels na-agbasa na America na akụ okomoko Dominica ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Dominica • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ndị otu ụlọ oriri na ọ hotelụ oldestụ kacha ochie na Europe nwere obi ụtọ iweta ihe nketa ya bara ụba nke ilebara onwe ha anya na ile ọbịa nke ọma na njedebe nke ọhụụ na America. Ogologo oge echere Cabrits Resort & Spa Kempinsky Dominica ga-emeghe ọnụ ụzọ ya nye ndị ọbịa na ndị ahịa pụrụ iche na 14 October 2019. Ebe ezumike ga-abụ nke abụọ nke Kempinski Caribbean ịmalite na Dominica bụ ebe mbụ nke nwere kpakpando ise.
Michael Schoonewagen, onye isi njikwa, Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica kwuru, sị, "Bringweta ọrụ a na mmezu bụ ihe ọzọ dị ịrịba ama maka ụlọ nkwari akụ Kempinski," "Anyị nwere obi ụtọ karịsịa maka ihe a n'ihi na ọ ga-enye ndị njem ohere ịnweta Dominica dị ka nke a na-enwetụbeghị ụdị ya site na iwekọta akụ na ụba na-adịghị agafe agafe nke Kempinski na njedebe nke njedebe, ala a na-emetụbeghị iji mepụta ahụmịhe kachasị mma ebe okomoko na-ezute okike."
Agwaetiti Nature nke Caribbean
N’ịbụ nke dị n’etiti Guadeloupe na Martinique, agwaetiti Dominica mara mma, nke a na-emetọghị emetọ bụ ihe nzuzo zoro ezo nke ndị Caribbean. Ewezuga njem nlegharị anya, agwaetiti ahụ na-adọta ma eco-adventurers na ndị na-achọ ịpụ na ndụ kwa ụbọchị. Gburugburu nke Cabrits National Park gbara gburugburu, ihe ngosipụta a na-enweghị atụ nke ebe a na-asọpụrụ ma na-echekwa ịma mma na usoro okike nke agwaetiti a na-enweghị atụ. A na-eme ezumike ebe a iji chebe izi ezi nke paradaịs a dị oke mkpa maka ọgbọ nke ndị njem na-abịa, ebe taa na-enye ahụmịhe ọhụụ nke na-eme ka enwee nguzozi dị n'etiti ala na oké osimiri.
Ime ụlọ na-agagharị na ama egwuregwu
A maara Dominica nke ukwuu nke ugwu ọhịa na oke ọhịa na mmiri ozuzo na-ekpo ọkụ, nke a maara Dominica nwere agwaetiti ndị ọzọ nke Caribbean "na-acha akwụkwọ ndụ". N'ezie, mgbe a bịara n'ịkọwa ọchịchị Dominica nye Eze Nwanyị Isabella nke Spain, Christopher Columbus enweghịzi ihe ọ ga-ekwu. Ugbu a, ihe karịrị afọ 500 mgbe nke ahụ gasịrị, ugwu ndị dị egwu nke Nature Island, ndagwurugwu na ala jupụtara na njem ka na-eme ka ndị ọbịa ghara ikwu okwu.
Hostingnweta ụdị osisi na anụmanụ dị iche iche, gụnyere ọtụtụ osisi ndị na-adịghị ahụkebe, ụmụ anụmanụ na ụdị nnụnụ, Dominica na-echebe usoro ogige dị ukwuu nke gụnyere ogige ntụrụndụ atọ, oke ọhịa abụọ na Syndicate Parrot Reserve. Ndị na-achọ njem nwere ike ịnụ ụtọ ijegharị gburugburu ebe obibi na ọtụtụ ụzọ ụkwụ, na-ekiri nnụnụ ma ọ bụ naanị ịlele anụ ọhịa na gburugburu ebe obibi ha.
Ọzọkwa Dominica bụ ebe obibi nke mmiri ọkụ mmiri nke abụọ kachasị ukwuu na ụwa ma nwee osimiri 365, otu maka ụbọchị nke ọ bụla n'afọ, yana nsụda mmiri na-acha mmiri ọkụ na, n'ezie, osimiri na-eku ume, sitere na shuga-ọcha na aja aja mgbawa. N'inwe oke osimiri na coral dị iche iche, Dominica na-enyekwa mmiri mmiri na snorkeling maka mmiri maka mmiri nke ụwa a.
Ọdịdị sitere n'ike mmụọ nsọ
A na-ahọpụta ụlọ ezumike na ebe ezumike 151 nke ezumike n'ụzọ mara mma, site na ụlọ ndị mara mma na nke kachasị elu nke na-egosipụta ugwu ma ọ bụ echiche oke osimiri na nnukwu ụlọ ndị sara mbara na ime ụlọ ime ụlọ abụọ na ime obodo. Site n'ike mmụọ nsọ nke mara mma, nke ọ bụla nwere palette na-atọ ụtọ nke agba mmiri n'ụsọ oké osimiri, ụda osisi zuru ezu na ọkụ ọkụ zuru oke, na-eweta ịma mma nke n'èzí. Mgbe ụwa na-anọghị, ndị ọbịa ga-ahụ oge niile nke ụlọ nke oge a n'aka ha. , site na onyonyo ihuenyo dị larịị na ọrụ Wi-Fi na-arụ ọrụ n'ime igwe espresso na ime ụlọ ịwụ ahụ mara mma.
Maka ahụmịhe kachasị nke Cabrits, 4,585 sq ft Presidential Villa nwere echiche dị oke osimiri, ọrụ raara onwe ya nye, ụzọ mbata nke onwe, ime ụlọ abụọ, ime ụlọ ịwụ abụọ na ọkara, ime ụlọ erimeri, ime ụlọ spa nke nwere sauna na nnukwu, buru ibu teres maka iri nri n'èzí, juputara na imi ihe na ọdọ mmiri nke onwe. A onwe siri nri bụkwa dị na arịrịọ.
Mmemme maka Mmetụta
Ejiri nlezianya tụlee nkọwa ọ bụla banyere ahụmịhe nke ndị ọbịa na Cabrits Resort na Spa Kempinski iji mee ka ndị ọbịa nwee mmetụta, ịnụ ísì, hụ, ịnụ na ịnụ ụtọ ihe Dominica ga-enye. Site na etu esi esi nri nri, ụlọ oriri na ọ resortụ threeụ atọ dị iche iche na-egosipụta nri obodo na nke ụwa yana nri ugbo-na-tebụl na nke “oke osimiri na tebụl”.
Restaurantlọ oriri na ọ signatureụ signatureụ mbinye aka nke ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ ahụ, Cabrits Market, na-enye ikuku nke agba agba na ụtọ na-egosi ahịa Creole. Ọtụtụ ụlọ ọrụ nri na-emekọrịta mmekọrịta gụnyere ọtụtụ ọnụ ahịa mba ụwa sitere na Italiantali gaa na mmanya na-adighi, n'ezie, nri abalị Creole-themed na brunch opulent.
Kweyol Beach Café na-ewere ihe pụrụ iche na ogwe osimiri osimiri Creole ọdịnala nwere ụzọ dị elu. Inye ngwakọta dị ụtọ nke efere Creole, ọkacha mmasị mba ụwa na ihe ụtọ ice cream dị ka aki oyibo, ụlọ oriri na ọ viewụ seaụ nke osimiri a bụ ihe a ga-eme maka ndị ọbịa ọ bụla.
Bonsai na-eri nri nri Pan-Asia dị ka ihe na-atọ ụtọ na nnukwu ụlọ nri na ebe a na-egwu mmiri. Bonsai na-enye sushi, sashimi, satays, curry Thai, efere wok na sautéed na ndị ọzọ gafee Eshia.
Na ime ụlọ na ime ụlọ, Ogwe Rumfire na-eje ozi dị ka ebe kachasị mma iji mechie ụbọchị ahụ, na-ele anya mgbe anyanwụ dara mgbe ọ na-a aụ mmanya ma ọ bụ na-enwe ezigbo sịga. Ọkachamara ọkachamara na mixologist na-akwadebe ma ọ classicụ mmanya ochie na ihe okike mbụ jiri rums Caribbean na mpaghara na mmụọ gbara ọchịchịrị.
Chịkọta ahụmịhe nke ihe nkiri ahụ bụ 18,000 sq ft Kempinski Spa. Ndị ọbịa nwere ike ịhọrọ site na ahụmịhe nke ahụike ụlọ na n'èzí, na-ewetara onwe ha nso na okike ma mepụta njikọ na usoro okike pụrụ iche nke agwaetiti ahụ. Nchịkọta nhọrọ nke spa gụnyere ọgwụgwọ sitere na ọdịbendị obodo na echiche nke ọnọdụ.
Nzukọ na Ihe Ndị A Na-agaghị Echefu Echefu
Site na ọnọdụ pụrụ iche na-eche ihu ọdịda anyanwụ na Douglas Bay Beach na ikuku Creole ọdịnala, Cabrits Resort & Spa na-enye ụfọdụ ntọala pụrụ iche ma na-atụ ụjọ maka nzukọ a na-echefu echefu, nnọkọ ezinụlọ na oge pụrụ iche. Ebe a na-enye ihe karịrị 8,000 sq ft nke ime ụlọ na n'èzí, gụnyere osimiri, ọdọ mmiri na ebe ahịhịa, maka agbamakwụkwọ na mmemme yana ụlọ nzukọ atọ, ime ụlọ na ebe a na-eme egwuregwu n'èzí. Ndị otu egwuregwu nwere ọgụgụ isi nwere ike inye aka n'ịhọrọ ebe mgbakọ na menus zuru oke dabere na ogo na mmasị ndị ọzọ.